no such login in the system. please try again. MMRA Membership
Type of Membership	: (Please select Member Type) Retail Member Associate Member
Application Form	:
**Associate Member အဖြစ်လျှောက်ထားသူများမှာ ကုမ္ပဏီလိုင်စင်မိတ္တူ နှင့် Associate Member Form ကို Document တစ်ခုထဲတွင် ပူးတွဲပြီး တင်ပေးရပါမည်။
MMRA အသင်းမှပြန်လည်စိစစ်ပြီးမှသာ MMRAအသင်းဝင်အဖြစ်သင့်တော်မည့်သူအား လျှောက်ထားသူ၏ Email Address သို့ Approval Letter ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
Approval Letterရရှိပြီးမှသာ Approval Letterအတွင်းတွင်ပါရှိသော Website Link မှတဆင့် MMRA Website သုိ့ Guest Register လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း၏ တတိယအကြိမ် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ
ဟောပြောဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ်- သင်၏လက်လီလုပ် ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်အောင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း
ကျင်းပမည့် နေရာ - UMFCCI ၊ ပထမထပ် (မင်္ဂလာခန်းမ)အမှတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
More Detail: မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း၏ တတိယအကြိမ် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း၏ ဒုတိယအကြိမ် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ
ဟောပြောဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ်- ထိရောက်သော လက်လီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု မည်သို့ဆောင်ရွက်မည်
ကျင်းပမည့် နေ့ရက် - ၄ရက်နေ့ သြဂုတ်လ ၂၀၁၃ခုနစ်
More Detail: မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း၏ ဒုတိယအကြိမ် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ